सफल बन्न चाहनेका लागि नेपोलियनको कथा मागनिर्देशक शिक्षा AahaKhabar
सफल बन्न चाहनेका लागि नेपोलियनको कथा मागनिर्देशक शिक्षा
काठमाडौं। मध्यरातको समयमा बाहीर घमासाना युद्ध चलिरहेको थियो, फ्रान्सका सम्राट नेपोलियन पाल भित्र मस्त सँग सुतिरहेका थिए। त्यही समयमा एक्कासी नेपोलियनका अंगरक्षकले उनलाई उठाउँदै भने, ‘महाराज, सेनापती तपाईसँग तुरुन्तै भेट गर्न चाहन्छन्।’
मस्ता निन्द्रामा रहेका नेपोलियन अंगरक्षकले बोलाएपछि विउँभिए र कोल्टे फेर्दै भने सोध के कुरा हो ? अंगरक्षकले अत्तालिदै भने, ‘दक्षिणतिरबाट पुरै घेरेर शत्रुको सेनाले हमला गरेका छन्। सेनापति अब के गर्ने भन्ने बारेमा थाहा पाउन चाहन्छन्।’
तर, यति ठूलो खबर सुन्दा पनि नेपोलियन फिटिक्कै विचलित भएनन्। उनले सेनापतिलाई नबोलाइ अंरक्षकलाई नै भने, ‘कुनाको बक्सामा चौतिस नम्बरको एउटा नक्शा राखिएको छ। त्यो सेनापतिलाई देऊ र भन्न उनी बिहान आएर मलाई युद्धको बारे जानकारी दिउन।’
त्यो नक्सामा दक्षिणतिरका सेनाले आक्रमण गरे भने जवाफी कारवाही कसरी गर्ने भन्ने देखाइएको थियो। त्यही अनुसारको युद्ध भयो र नेपोलियनको सेना विजयी भए। भोलिपल्ट सेनापतिले जितको सूचना दिदै नेपोलियनलाई सोधे, ‘यती छिटै कसरी योजना बनाउनुभयो ? के कुनै देवताले तपाईंको मद्दत गर्छन ?’
नेपोलियनले जवाफ दिए, ‘हो, विचार र दुरदर्शिता नामक दुई देवता सँधै मेरो साथ रहन्छन्।’ उनैले भविष्यको सम्भावनाप्रती मानिसले पहिलादेखि नै जागृत र सावधान हुनुपर्छ भन्ने सिकाए। भविष्यप्रति हाम्रो दृष्टि जति स्पष्ट, जति व्यापक र जति गहिरो हुन्छ त्यति नै हामी जीवनमा सफल हुन सक्नेछौं।